Soo dejisan CPU-Z 1.19 – Android – Vessoft
AndroidNidaamkaTijaabada iyo TijaabooyinkaCPU-Z
Bogga rasmiga ah: CPU-Z
Processor-Z – software ah in uu soo bandhigo qaab ka mid ah qaybaha nidaamka qalab ah. Processor-Z u saamaxaaya in ay bartaan saaraha iyo model ah qalabka, version of nidaamka qalliinka, lacagta xasuusta ugu weyn, macluumaadka processor dhexe iwm software soo bandhigayaa xog batteriga, oo ay ku jiraan macluumaad ku saabsan korontada, heerkulka bandhigay, heerka oogin danab. Processor-Z kuu ogolaanaya in aad si aad u ogaato macluumaadka faahfaahsan oo ku saabsan xallinta shidma iyo daaha ka mid ah qalab ka. Processor-Z ayaa sidoo kale u saamaxaaya in ay Customize modules in bandhigaan macluumaadka ku saabsan qaybaha kala duwan ee nidaamka.
Muujiya macluumaadka faahfaahsan oo ku saabsan nidaamka of qalabka
Xogta ku saabsan batteriga oo shidma
Settings qaybaha oo muujiya xogta
Soo dejisan CPU-Z
Faallo ku saabsan CPU-Z
CPU-Z Xirfadaha la xiriira
AnTuTu Benchmark – waa barnaamij adag oo lagu tijaabiyo waxqabadka aaladda. Softiweerku wuxuu soo bandhigayaa macluumaadka faahfaahsan ee ku saabsan awooda aaladda wuxuuna awood u siinayaa inuu isbarbar dhigo natiijooyinka halbeegga leh aaladda kale.
Archiver ayaa file awood leh oo taageero ka ugu of qaabab archive. Software waxa uu leeyahay tiro balaadhan oo ah qalab iyo muuqaalada si loo hubiyo in shaqada wax soo saar leh archives ah.
Gadaal HD – softiweer leh noocyo badan oo sawirro ah oo noocyo iyo noocyo kala duwan ah. Software-ka wuxuu taageeraa raadinta gidaarka iyadoo la adeegsanayo qiimeynta isticmaaleyaasha kale isla markaana wuxuu soo bandhigayaa sawirrada cusub.
Hotspot Shield – waa aalad lagu hubiyo sirta internetka. Softiweerku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad qarin karto cinwaanka IP-ga ee isticmaala isla markaana aad marin u hesho goobaha xanniban.